एक्लै यात्राको लागि सल्लाहहरू यात्रा समाचार
एक्लै यात्राको लागि सल्लाहहरू
यद्यपि सुरुमा यसले केही योग्यताहरू दिन सक्दछ, विशेष गरी अनुभवहीन यात्रुहरूलाई, सत्य यो हो कि एक्लै यात्रा एक अविस्मरणीय, लत बन्न र सबै समृद्ध अनुभव माथि हुन सक्छ। यसका धेरै फाइदाहरूमध्ये तपाईंको आफैंसँग समय बिताउने र आफुलाई राम्रोसँग चिन्ने अवसरको रूपमा, र तपाईंलाई चाहेको जुनसुकै योजना बनाउन स्वतन्त्रता पनि हो।
यदि तपाईंलाई पहिले एक्लै यात्रा गरेर कहिल्यै काटिएको छैन र निर्णय गर्नु अघि सन्दर्भहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यहाँ एकल यात्रा को लागी केहि सल्लाहहरु छन् जुन तपाईको पछाडि एक रमाईलो अनुभव मा बदल्छ।
1 एक्लै यात्रा गर्दा अफरहरु लाई ध्यान दिनुहोस्
2 एक्लै यात्रा गर्दा, सावधानी अपनाउनुहोस्
3 सञ्चार राख्नुहोस्
4 एक्लै यात्रा गर्दा तपाईंको मार्ग योजना गर्नुहोस्
5 कसरी वरिपरि हुने बारे अनुसन्धान गर्नुहोस्
6 आसपासका घटनाहरू सम्झनुहोस्
7 व्यक्तिलाई भेट्नुहोस्
8 तपाईको खाली समय प्रबन्ध गर्नुहोस्
एक्लै यात्रा गर्दा अफरहरु लाई ध्यान दिनुहोस्
हुनसक्छ तपाईंले आफ्नो सपनाहरूको यात्रा लामो समयको लागि योजना गर्नुभएको हो वा सायद तपाईं पहिलो पटक एक्लै यात्रा गर्ने ठाउँमा निश्चित हुनुहुन्न। यदि यो तपाईंको मामला हो र तपाईंको मिति लचिलो छ भने, हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्दछौं कि तपाईंले ध्यान दिएर अनौंठो प्रस्तावहरूको फाइदा लिनुहोस् जुन तपाईंलाई कम मूल्यमा विश्व हेर्नका लागि प्रस्तुत गरिन्छ। एक्लै यात्रा गर्नेहरूको मनपर्ने गन्तव्यहरूमध्ये एम्स्टर्डम, डब्लिन, न्यूयोर्क वा बैंकक, शहरहरू सधैं खुला हातले स्वागत गर्न तयार हुन्छन्।
एक्लै यात्रा गर्दा, सावधानी अपनाउनुहोस्
यात्रा को मिति अघि, तपाईं कोर्स सेट गर्न लाग्नुभएको गन्तव्यमा सोख्नुहोस्। त्यो हो, तपाई भ्रमण गर्न लाग्नु भएको स्थान र यसका चलनहरूका बारे जानकारी खोज्नुहोस्। भनाइ भइरहँदा, "तपाईं जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ के हेर्नुहुन्छ" ताकि यसले ध्यान नलगाउने र धेरै ध्यान नखोज्ने प्रयास गर्दछ। सबै भन्दा माथि, मनोवृत्तिबाट टाढा रहनुहोस् जसले स्थानीय मानिसहरूलाई दु: ख दिन सक्छ।
अर्को तर्फ, यात्राका लागि आवश्यक भ्याक्सिनहरूको बारेमा राम्रोसँग फेला पार्नुहोस्, कुन भाषा बोलिन्छ र मुद्राको साथसाथै भिसाको बारेमा पनि। महत्वपूर्ण कागजातहरू स्क्यान गर्न नबिर्सनुहोस्, जस्तै तपाईंको पासपोर्ट, र तिनीहरूलाई ईमेलमा पठाउनुहोस् ताकि तपाईं चोरी वा हराएको खण्डमा तुरून्त प्रतिलिपिहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं एक्लै यात्रा गर्न लाग्नु भएको छ भने, यात्राको क्रममा भएका नजिकका साथीहरूलाई तपाईंको योजनाको बारेमा जानकारी दिन महत्त्वपूर्ण छ ताकि उनीहरूलाई आपतकालिन अवस्थामा तपाईं कहाँ पुग्ने भनेर थाहा हुन्छ। यो होटल जहाँ तपाईं बस्दै हुनुहुन्छ वा निजी घरका पाहुनाहरू जहाँ तपाईं बस्नुहुने हुनुहुन्छ।
अर्को विकल्प भनेको यात्राको क्रममा तपाईंको सामाजिक नेटवर्कहरू सक्रिय राख्नु हो ताकि तपाईंको परिवारले तपाईंलाई पत्ता लगाउन सक्दछ यदि तिनीहरूलाई आवश्यक छ भने।
एक्लै यात्रा गर्दा तपाईंको मार्ग योजना गर्नुहोस्
जब हामी एक्लै गन्तव्यमा जान्दैनौं जुन हामी जान्दैनौं, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले आफूले चाहेको मार्ग योजना गर्नु पर्छ। कम्तिमा पहिलो दिनमा। यसले तपाईंलाई क्षेत्रको राम्रो नियन्त्रण गर्न र अधिक सुरक्षित महसुस गर्न मद्दत गर्दछ।
गन्तव्य एयरपोर्ट, होटल ठेगाना, पर्यटकीय आकर्षणहरूको दूरी जुन तपाईंले भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ, इत्यादिमा आगमन समयको साथ योजना बनाउनुहोस्। तपाईको परिवारलाई त्यो योजनाको एक प्रतिलिपि दिनुहोस् ठाउँको टेलिफोन नम्बरको साथ जहाँ तपाईं बस्नुहुनेछ जहाँ एक्लै यात्रा र ठेगाना ठेगाना।
कसरी वरिपरि हुने बारे अनुसन्धान गर्नुहोस्
एकचोटि तपाईंसँग यात्रा कार्यक्रम भयो, यो सुविधाजनक छ कि तपाईं यातायात प्रणालीको बारेमा जानकारी खोज्नुहुन्छ। यो सत्य हो कि तपाई एक पटक गन्तव्यमा पुगेपछि यो कार्य गर्न सक्नुहुनेछ, यात्राको अग्रिम रूपमा गर्नाले तपाईको समय मात्र बचाउँदछ र पर्यटकको पासोमा पर्नेछ।
आसपासका घटनाहरू सम्झनुहोस्
जब तपाईं होटेलमा पुग्नुहुन्छ यो आवश्यक हुन्छ कि तपाईंले आफ्नो स्थान पत्ता लगाउनको लागि क्षेत्र र पसलहरू अवलोकन गर्नु आवश्यक छ। आपतकालीन सेवाहरू र स्थानीय फोनहरू पनि हेर्नुहोस् यदि तपाईंलाई यो पहिचान गर्न आवश्यक परेमा।
जब यो यात्रा को लागी आउँछ, तपाईं प्रत्येक कदम आनन्द लिनु पर्छ
यदि जब यात्रा गर्ने कुरा आउँछ जब एक्लोपन हुन्छ, चिन्ता नलिनुहोस्। एक्लै यात्रा गर्नु साथी बनाउने उत्तम तरिका हो! र यो यो हो कि एक्लै यात्रा गर्दा हामी अपरिचितहरूसँग कुराकानी सुरु गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ। वास्तवमा, हामी सोच्दछौं भन्दा साधारणतया बढी व्यक्तिहरू एक्लो यात्राको लागि प्रयोग गर्दछन्, त्यसैले एकल यात्रीहरू मिलेर बनेको समूह भेट्टाउनु असामान्य हुँदैन।
या त होस्टलमा वा एउटा टुरको दौडान कुनै व्यक्ति सधैँ कोहीसँग कुरा गर्ने र केहि दिन साझेदारी गर्न उहि गन्तव्यमा यात्रा गर्दै आएका हुन्छन्। त्यसैले अब तपाइँलाई थाहा छ, लजालुपनबाट छुटकारा पाउनुहोस् र नयाँ व्यक्तिहरूसँग भेट्नुहोस्!
तपाईको खाली समय प्रबन्ध गर्नुहोस्
जब तपाईं एक्लै यात्रा गर्नुहुन्छ त्यहाँ मृत समयहरू हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, यो सल्लाह दिइन्छ कि तपाईंसँग सधैँ फुर्सदको समयमा केहि गर्नुपर्दछ: भ्रमण, हिंड्ने, शपिंग डे, सांस्कृतिक स्थानहरूमा भ्रमण गर्ने आदि।
एक राम्रो विचार भनेको एक यात्रा डायरी बनाउनु हो जसमा तपाईं रेकर्ड गर्नुहुन्छ कि समृद्ध पार्ने अनुभव जुन एक्लै यात्रा गर्दैछ। तपाईं आफ्नो भ्रमणको फोटोग्राफिक रेकर्ड पनि लिन सक्नुहुन्छ र अविश्वसनीय रिपोर्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ जुन पोस्टरिटीको लागि रहनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » एक्लै यात्राको लागि सल्लाहहरू
Lugo को भित्ताको माध्यमबाट पैदल यात्रा
बार्सिलोना को गोथिक क्वार्टर को माध्यम बाट मार्ग